पेनाल्टी छेकेर गोलरक्षकले जिताए ! ब्राजिल सेमिफाइनलमा | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more पेनाल्टी छेकेर गोलरक्षकले जिताए ! ब्राजिल सेमिफाइनलमा
असार १३ गते, २०७६ - ०९:००
एजेन्सी । गोलरक्षक एलिसन बेकरले टाइब्रेकरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि ब्राजिल कोपा अमेरिका २०१९ को सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । निर्धारित ९० मिनेटको खेलमा दुवै तर्फबाट गोल नहुँदा खेल टाइब्रेकरमा धकेलिएको थियो । टाइब्रेकरमा ब्राजिल ४-३ ले विजयी रहयो ।
त्यसअघि निर्धारित समयमा ब्राजिलले खेलको सुरुवाती समयमा पाराग्वेको गोलरक्षकलाई परिक्षण गरेपनि अग्रता लिन सकेन । २९ औं मिनेटमा पाराग्वेले गोल गर्ने अवसर प्राप्त गरेपनि गोलरक्षक एलिसन बेकरले उत्कृष्ट बचाउ गरे । डेर्लिस गोन्जालेजको पासमा पेरेजले वन भर्सेस वनको स्थितिमा ६ यार्ड बक्स नजिकबाट गरेको प्रहारलाई एलिसनले बचाएका थिए ।
दोस्रो हाफको ६० औं मिनेटमा पाराग्वे १० खेलाडीमा सिमित भयो । फाबियन बालबुएनाले पेनाल्टी क्षेत्रको ठिक बाहिर रोबर्टो फिर्मिनोलाई लडाएपछि रेफ्रीले भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भीएआर) को सहायता लिँदै निर्णय लिएका थिए । रेफ्रीले सुरुवातमा ब्राजिललाई पेनाल्टी दिने निर्णय गरेपनि भीएआरको सहायतापछि बालबुएनालाई रातो कार्ड दिँदै ब्राजिललाई फ्रिकिक दिएका थिए ।
पाराग्वे १० खेलाडीमा सिमित भएपछि ब्राजिलले आक्रमणमा खेलाडी थप्दै दबाब बढायो । ६९ औं मिनेटमा आर्थरको लामो दुरीको प्रहारले पोस्टको दिशा लिन सकेन । ७४ औं मिनेटमा ग्याब्रिएल जेससले ६ यार्ड बक्स नजिकबाट गरेको प्रहार पोस्टभन्दा थोरै दुरीबाट बाहिरियो । लगत्तै एभरटनको प्रहार डिफेन्डर इभान पिरिसलाई लाग्दै बाहिरियो ।
निर्धारित समयको तीन मिनेट बाँकी रहँदा पाराग्वेका गोलरक्षक फर्नान्डेजले उत्कृष्ट बचाउ गर्दै खेल बराबरीमा राखे । कोउटिन्होले दायाँ विङबाट फ्रिकिकमा दिएको पासमा एलेक्स स्यान्ड्रोको हेडरलाई उनले डाइभ दिंदै विफल परे । ९० औं मिनेटमा विलियनले पेनाल्टी क्षेत्र बाहिरबाट गरेको प्रहारले गोलरक्षकलाई बिट गरेपनि पोस्टमा लागेर फर्कंदा ब्राजिलले खेलमा अग्रता लिन सकेन । थप गरिएको ७ मिनेट इन्ज्युरी समयमा ब्राजिलले पाएको दुई अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा खेल टाइब्रेकरमा पुगेको थियो ।
–खेलकुद डटकम बाट
असार १३ गते, २०७६ - ०९:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । गएराति नेपालका उच्च घरानाका व्यापारीहरु जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन् । लकडाउनको...